६ वर्षीय बालकको कमाइ १ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी ! « Image Khabar
६ वर्षीय बालकको कमाइ १ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी !
२८ मंसिर २०७४, बिहीबार २०:४३
‘बीबीसी’का अनुसार रेयानले परिवारको सहयोगमा सन् २०१५बाट उक्त ‘यूट्यूब च्यानल’ सुरु गरेका थिए । एक वर्षमै उनको च्यानल हेर्ने दर्शकको संख्या १६ अर्बभन्दा बढी पुगेकोे छ भने उनको एउटै भिडियो ८० करोडभन्दा बढी मानिसहरुले हेरिसकेका छन् । त्यस्तै, १० लाखभन्दा बढी मानिसहरुले उनको च्यानल ‘सब्स्क्राइब’ गरेका छन् । एजेन्सी
अझ धेरै रोचक समाचार पढ्नुहोस्
महालक्ष्मी र किराँतेश्वर जेभीसँग २०७५ असार २९ मा सम्झौता भएको सो खण्ड आगामी चैत्रसम्ममा पूर्ण रूपमा कालोपत्र हुने भएपछि स्थानीय खुसी छन् ।
प्रदेश २ का निर्वाचन संजोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै हुने गरी स्थगित भएको बताउनुभयो
प्रेस चौतारी चितवनले सोमबार भरतपुरमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले आफ्नो संगठन विस्तारमा एमाले लागिसकेको भन्दै आउने निर्वाचनसम्म संगठनलाई चुस्त बनाउने बताउनुभयो ।